Ahlusuna Oo Gabi ahaanba lasoo AjraybKadib markii lagala wareegay Hubkii iyo Gadiidkii dagaalka - HOBYOMEDIA
Home Uncategorized Ahlusuna Oo Gabi ahaanba lasoo AjraybKadib markii lagala wareegay Hubkii iyo Gadiidkii...
Ahlusuna Oo Gabi ahaanba lasoo AjraybKadib markii lagala wareegay Hubkii iyo Gadiidkii dagaalka
Waxaa Xalay Saqdii Dhexe Ciidamada Federaalka iyo kuwa Galmudug isku soo dhiibay koox horjoogayaal ah oo uu hoggaaminayay Cabdulaahi Cabdi Raage oo kamid ahaa xubnaha sare ee Kooxda la baxday Ahlusunna, dhamaan hubkii ay wateen waxaa la wareegay laamaha amniga.
Waxaa sidoo kale socda qorshe socda oo ay isku soo dhiibi rabaan tiro kale oo iminka lagu howlan yahay, qorsheynta habkii hubka looga dhigi lahaa.
Gaadiidka Ahlusuna Qeybo kamid ah oo Qoryihii laga furtat ayey la wareegeen Ciidamada Dowlada Soomaaliya.
Deegaanka Qalaanqalle oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka Tirsanaa ASWJ ayaa ka dhego adeegay in ay baabuurta dhiibaan laakiin 30 daqiiqo xabbad socotay ayaa lagu guulaystay in nolosha lagu qabto.
Sidoo kale Baabuurtii waxaa la wareegay ciidanka dowladda.
Previous articleViilla Soomaaliya oo bixisay lacagtii abid Ugu badnayd ee cod lagu Iibsado iyo Musharixiinta qaar oo cabsi soo Wajahday
Next articleNinka weerarka gaystay ayaa isticmaalayay Kaamirad si uu khadka internedka ugu baahiyo weerarka uu gaysanayay.